Tôgô - Wikipedia
I Tôgô dia firenena ao amin' ny faritry Afrika Andrefana, izay manana morontsiraka ao amin’ ny helodranon' i Ginea sy ao amin' ny Ranomesimbe Atlantika. Manana vekaran-tany mirefy 56 785 km². I Lomé no renivohiny.
Sainam-pirenen' i Tôgô
I Tôgô ao Afrika
Sarin-tanin' i Tôgô
Mahatra 550 km ny morontsirak' i Togo, izay avy any avatatra mianatsimo. Ny morontsiraka ao atsimo dia iva dia iva sady misy fasika. Ahitana ala ny any avaratra. Mafana sy mando ny toetany any. Be tendrombohitra ny ao afovoan' i Tôgô, izay manana tampona any amin' ny haambo 986 m. Ny any avaratra kosa dia rakotra hivoka anirian-kazo sy manana toetany maina.
Ny vahoaka tôgôley dia ahitana vondrom-poko efapolo any ho any, ka ny lehiba aminy dia ny Eoe (manakaiky ny 50 %n’ ny mponina) sy ny Kabre (20 % eo ho eo). Be mpanaraka ny fivavahan-drazana afrikana, Kristiana ny 35 % ary Miozolmana ny 20 %.
Miankina amin’ ny fampbolena sy ny fiompiana ny toekaren' i Tôgô, ka anisan’ izany ny kakaô, ny voanjo, ny landihazo ary ny katsaka. Manondrana harena an-kibon' ny tany koa i Tôgô ka ny fôsfaty no lohalaharana amin' izany.
Zanatany alemàna avy eo frantsay taloha i Tôgô nefa nahazo ny fahaleovan-tenany tamin’ ny taona 1960. Ny fiteny eoe (ewe) sy ny fiteny frantsay ary ny fiteny kabre no fiteny ôfisialy any.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tôgô&oldid=1043343"
Dernière modification le 26 Janoary 2022, à 17:11
Voaova farany tamin'ny 26 Janoary 2022 amin'ny 17:11 ity pejy ity.